RASMI: AC Milan oo la saxiixatay Fabio Birini + Sawirro & muuqaal – Gool FM
(Milano) 30 Juunyo 2017 – Kooxda AC Milan ayaa ku dhawaaqday inay la saxiixatay weerarka Fabio Borini oo ay kasoo qaateen Sunderland, isagoo noqonaya weerarkii 2-aad kaddib André Silva iyo laacibkii 5-aad ee ay xagaagan soo iibsadaan.
AC Milan waxay sheegtay inay laacibka Sunderland AFC uga keensatay qaab amaah oo ay sanad kaddib ku khasban tahay inay wada iibsato weerarkan reer Talyaani oo muddo kaddib dib ugu soo laabtay Talyaaniga.
Laacibka ayaa shalaytoole caafimaadka u maray Milan isagoo ku baasay dhamaan tijaabooyinkii laga qaaday oo ay ku jireen kuwa jireed.
26-jirkan oo usoo dheeley kooxaha Chelsea, Swansea City, Parma, Roma, Liverpool iyo Sunderland ayaa ku imanaya €6m (£5.3m).
“Ma jiro naadi ka wanaagsan oo aan shaqadayda ka wadan lahaa, waana ku faraxsanahay inaan halkan imaado.” ayuu yiri Borini oo uu garab fadhiyay Marco Fassone oo sheegay inuu muddo raadinayay laacibkan maaddaama uu yahay mid sida uu yiri ‘nafta u hura kooxda.’